माप्यदुधकोशी अपडेट : अध्यक्षकै फर्मलाई ठेक्का ! - Sagarmatha Online News Portal
माप्यदुधकोशी अपडेट : अध्यक्षकै फर्मलाई ठेक्का !
सोलुखुम्बु । जिल्लाको माप्यदूधकोसी गाउँपालिकाले २०७४ साल माघ १७ मा उदयपुरको गाईघाटबाट प्रकाशितत्रियुगा एक्सप्रेस दैनिकमा तीनवटा सडकखण्ड स्तरोन्नतिको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्यो । यो पत्रिका गाईघाट आसपासभन्दा अन्त वितरण हुँदैन । त्यसैले, सोलुखुम्बु र अन्य स्थानका निर्माण व्यवसायीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्काको विषयमा जानकारी पाएनन् ।
गाउँपालिकाले ती सडक खण्डमध्येको एउटाको ठेक्का ‘एस कन्सट्रक्सन’ ठेकेदार कम्पनीसँग गर्यो । उक्त कम्पनी सोही गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईकी श्रीमती सीता राईको नाममा दर्ता रहेको छ । ठेक्का नं. आर-यू ३ ०७४/७५ को काँकुमैदान-काँकु भीमसेनस्थान (चेल्सीखोला) सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का अध्यक्ष राईले आफ्नै कम्पनीसँग सम्झौता गरे । बोलपत्र आह्वानमा लागत अनुमान (कन्टेन्जेन्सी र मूल्यअभिवृद्घि करबाहेक) ३० लाख १३ हजार ६ सय २ रुपैयाँ ५६ पैसा राखिएकोमा २०७४ साल चैत ३ मा भएको ठेक्का सम्झौतामा मूल्यअभिवृद्घि करसहित ३३ लाख ९९ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ ५५ पैसामा सम्झौता भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले सूचनामा उल्लेख गरिएको रकमबाट घटाघटमा ठेक्काका लागि बोलपत्र खरिद गरी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लाका अन्य व्यवसायीले थाहा नपाउने गरी सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षकै फर्ममा मूल्य नघटी ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएको निर्माण व्यवसायीको सूचीमा अझै पनि एस निर्माण सेवा कम्पनीको प्रोपाइटर बुद्धिकिरण राई रहेको देखिन्छ । तर, गाउँपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा भने प्रताप राई भन्ने व्यक्तिको नामबाट ठेक्का सम्झौता भएको छ । साविकको बासा गाविस-६ (हाल माप्यदूधकोसी गाउँपालिका-३) की सीता राईको नाममा राईको दर्ता भएको कम्पनीको नाममा दुईवटा जेसीबी र चेनवाला स्काभेटर रहेको छन् । उक्त स्काभेटरले सोही आर्थिक वर्षमै गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ को गरी जम्मा १५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तारको काम गर्यो । प्रहरी चौकी भवनका लागि घडेरी, २० भन्दा माथि व्यक्तिगत घडेरी, बासख्वाम (साकेलाथान), श्री सगरमाथा माविको ग्राउन्ड सम्याउनेजस्ता काममा समेत प्रयोग भयो । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बाट ६ सम्म जोड्ने सडक ट्र्याक खोल्ने काम पनि राईकै डोजरले गरेको थियो । प्रतिघण्टा ७ हजारभन्दा बढी भाडा लिएर सडक खनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कूल १ करोड १९ लाख ८ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ ४ पैसाका तीनवटा ठेक्कामध्ये अन्य दुई ठेक्का भने गाउँपालिकाकै प्राविधिक भरुमान राईकी श्रीमती कल्पना राईको नाममा रहेको डीजे कन्स्ट्रक्सन र अर्को भक्तबहादुर राईको नाममा रहेको बीआर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकमको ठेक्का भने अध्यक्ष राईको कम्पनीले पाएको थियो । डिजे कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ ७३ पैसा र बीआर कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९९ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ १६ पैसा बरारबरको ठेक्का सम्झौता गरी काम थालेका थिए । तर, उनीहरूले गरेका स्तरोन्नतिको कामसमेत गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ । अध्यक्ष राई भने आफूमाथि लागेका सबै आरोप निराधार भएको बताउँछन् । “जिल्लाकै स्थानीय तहहरूसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेँ,” अध्यक्ष राईले भने, “तर, मलाई नै अनेक आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्ने किसिमले साथीहरू लाग्नुभएको छ । ममाथि लगाइएका कुनै पनि आरोप सत्य होइनन् ।”
उनले आफ्नै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । “साथीहरुले के-के गरे मलाई थाहा छैन,” उनले भने, “तपाईंले लगाएका आरोप गलत हुन् । त्यस्तो केही भएको छैन ।” अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिन गर्दा प्रमाणित भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिन आफू तयार भएको उनले बताए । आफूले व्यक्तिगत हितमा नभई गाउँपालिकाको हितका लागि काम गरेको उनले दाबी गरे । उनका कार्यपालिका सदस्यहरुले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई विभिन्न मुद्दा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दर्ता गरेका छन् । मिडिया फाउन्डेशनको सहयोगमा
बुद्धिकिरण राई एस कन्सट्रक्सनको मालिक रहेको सोलुखुम्बु जिल्ला समन्वय समितिको रहेको निर्माण कम्पनीहरुको सूचीमा इजाजत नम्बर ६३ मा देखिने अभिलेख । सबै तस्वीरहरुः- कुम्भराज राइ ।
सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईको आफ्नै कम्पनी एस कन्सट्रक्सनसँग भएको ठेक्का सम्झौतापत्र ।
सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेको ठेक्का सम्बन्धि सूचना ।